अल्फा र ओमेगा परमेश्वर : नेपालचर्च डट कम NepalChurch.com
के तपाईंको जीवनमा कुनै असल कुरा शुरु भएको छैन ? जहिले खराबै मात्र भईरहेको छ? के तपाईंको कुरा राम्ररी अन्त हु सकेको छैन? तपाईंलाई कसले राम्रो र असल कुरा भनेका छ्रैनन् । तपाई विषयमा केवल नकारात्मक कुरा मात्रै भनेका छन् कि? के परमेश्वर हुनु हुन्न उहाँले मेरो जीवनमा काम गर्नु हुन्न भन्ने सोंच्दै हुनु हुन्छ कि? आज हामी विश्वासीजनहरुले जान्नु पर्ने सत्य के हो भने परमेश्वर तपाईंको अल्फा अनि ओमेगा हुनु हुन्छ । उहाँमा तपाईंको निम्ति असल शुरुआत र अन्त राखिएको छ ।
“अल्फा र ओमेगा म नै हुँ, सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो र जो आउनुहुनेछ ।” प्रकाश १:८ ।
यहाँ प्रकाशको पुस्तक बृद्ध यूहन्ना प्रेरित पत्मोसको टापुमा रहदाँ परमेश्वरले देखाउनु भएको दर्शनको कुरा अनि प्रकाशको बयान गरिएको पुस्तक हो । जतिबेला यूहन्नाको समयमा विश्वासीहरुमाथि संकट आईरहेको थियो । यस्तो जटिल अवस्थामा मण्डलीहरुलाई साहस र ढाडस मिलोस्, प्रभुमा वलिया रहून भनेर नै यो प्रकाशको पुस्तक परमेश्वरले यूहन्नालाई दिईएको प्रकाशको कुरा लेखिएको थियो । चरम निराशा, चरम संकट अनि आशा हराउन लागेको समयमा परमेश्वरले आशा, भरोसा अनि सान्तवना दिनुभएको कुरा यस प्रकाशको पुस्तकमा देखिन्छ ।
यहाँ परमेश्वरले अल्फा र ओमेगा म नै हुँ भनेर भन्नु भएको छ । यहाँ अल्फा भन्ने शब्द ग्रीक भाषाको पहिलो अक्षर हो भने ओमेगाचाहिं ग्रीक भाषाको अन्तिम अक्षर हो । (अर्थात परमेश्वर शुरु अनि अन्त हुनुहुन्छ ।) यसको अर्थ परमेश्वरले हामीलाई ग्रीक भाषाको शब्दहरु सिकाउनु भएको भन्ने कुरा होईन । उहाँले यूहन्नालाई वास्ताविक कुरा बताउदै हुनुहुन्थ्यो । किनकि परमेश्वरमा नै सबै कुराको शुरु हुन्छ र परमेश्वरमा नै सबै कुराको अन्त हुन्छ भन्ने कुरा बताउनु भएको हो । निश्चय पनि परमेश्वरमा नै सबै कुरा निहित हुन्छन् । यशैयाले यस किसिमले बताएका छन्, “….पहिलो र पछिल्लो चाहिं म नै हुँ । म बाहेक अरु परमेश्वर छैन ।” यशैया ४४:६ । परमेश्वर नै शुरु अनि अन्त हुनुहुन्छ । जस्तो कि परमेश्वरले नै सबै कुरा शुरु गर्नुभयो अनि उहाँमा नै सबै कुराको अन्त पनि छ । कुमालेले भाँडा बनाउनु भन्दा उसको कुनै शुरुआत हुँदैन । कुमालेले बनाउँदा मात्र त्यसको शुरुआत हुन्छ । र यसको अन्त पनि कुमालेको सेवा गररे हुँदछ । परमेश्वरले नै हरेक कुराको शुरु गर्नुभएको छ । उहामा नै अन्त पनि छ । किनकि उहाँ अल्फा र ओमेगा हुनुहुन्छ ।
परमेश्वर अल्फा हुनुहुन्छ
निश्चय पनि परमेश्वर अल्फा हुनुहुन्छ । हामीले भन्यौ कि अल्फाचाहिं ग्रीक भाषाको पहिलो अक्षर हो । निश्चय पनि परमेश्वरद्धारा नै सबै कुरा शुरु भएका हुन् । हामीले परमेश्वरलाई नै पहिलो स्थान दिनु पर्दछ । किनकि सबै असल कुरा तपाईंको जीवनमा परमेश्वरले शुरु गर्नुहुन्छ । कुनै पनि कुरा शुरु हुनु भन्दा अगाडि परमेश्वर नै अगाडि हुनुहुन्थ्यो । भजनसंग्रहको पुस्तकमा मोशाले भनेका छन् “पहाडहरु उत्पन्न हुनुभन्दा अघि अथवा तपाईंले पृथ्वी र संसार सृजनु भन्दा अघि, अनादिदेखि अनन्त सम्म तपाईं नै परमेश्वर हुनुहुन्छ ।” भजनसंग्रह ९०:२ । परमेश्वर नहनुभएको कुनै पनि समय नै थिएन । परमेश्वर अद्धितप्य हुनुहुन्छ । अनन्त, परिवर्तन नहुने अनि न्यायी हुनुहुन्छ । परमेश्वर भलो र सत्य पनि हुनुहुन्छ । उहाँ अल्फा हुनुहुन्छ । उहाँमा सबै कुरा शुरुआत भएका हुन् । उहाँमा नै संसारमा भएका कुराहरुको शुरु भएका हुन् । उहाँमा नै मानव जीवन शुरु भएको हो । उहाँमा सबै असल कुराहरु शुरु हुन्छ । उहाँमा सबै कुरा निहित रहेको हुन्छ । उहाँमा नै सबै कुराको अस्त्तिव रहेको छ । पावलले भनेका छन् “…हामी उहाँमा जिउँछौं, र उहाँमा चहलपहल गर्छौ, र उहाँमा हाम्रो अस्त्तिव छ ।” प्रेरित १७:२२ । परमेश्वरमा नै हाम्रो अस्त्तिव छ । उहाँमा जीवन छ । उहाँकै जीवन पाएर हामी शुरु भएका हौं ।
परमेश्वर अल्फा हुनुहुन्छ । उहाँले तपाईंको जीवनमा आज नयाँ काम शुरु गर्नु हुन्छ । कतिचोटी तपाईंको जीवनमा हरेस खाने अवस्था छ होलान् । तपाईंको जीवनमा तपाईंले गरेको एउटा सानो गलत निर्णयले जीवनमा ठूलो बोझ अनि भारी परीरहेको छन् होला । जीवन अन्धकार अनि असफलता अनि निराशामा गुज्रनुभएको होला । थकितपना, रोग बिमार अनि अशान्तिमा जिउनुभएको होला । परमेश्वरले तपाईंको जीवनमा उहाँको काम शुरु गर्न चाहनुहुन्छ । केवल उहाँमा तपाईंले आफ्नो जीवन अर्पण गर्नु परेयो । उहाँ आफ्ना पापहरु पश्चताप गरी फर्कनु परेयो । उहाँको वचन अनुसार हिंड्नु परेयो । उहाँमा तपाईंको जीवन नयाँ तरिकाले शरुआत हुनेछ । उहाँमा तपाईंको जीवनमा एउटा नयाँ अशिष, नयाँ काम, परमेश्वरको अलौकिक काम शुरु हुँदछ । उहाँले असम्भव कुरालाई सम्भव तुल्याउनु हुन्छ । उहाँले अचम्मको काम तपाईंको जीवन आशिषको झरी खन्याउन हुन्छ । किनकि परमेश्वर अल्फा हुनुहुन्छ । उहाँ शुरु हुनु हुन्छ । उहाँले नै संसारमा भएका हरेक कुराहरुको शुरु गर्नु भएको हो । उहाँमा नै संसारमा भएका सबै कुराको अन्त पनि हुनेछ ।
परमेश्वर ओमेगा हुनुहुन्छ ।
परमेश्वर ओमेगा हुनुहुन्छ । ओमेगा चाहिं ग्रीक भाषाको अन्तिम अक्षर हो । परमेश्वरको अन्त पनि हुनुहुन्छ । सबै शुरु भएका कुराहरुको अन्त पनि छ भन्ने कुरा बुझनु जरुरी छ । जो मानिसहरु प्रभुमा हुन्छन् उनीरुको अन्त राम्रो हुन्छ । उनीहरुको अन्त सुःखद हुन्छ । जनो मानिसहरु प्रभुमा नजीक हुदैनन् । प्रभुको इच्छा र वचन अनुसार हिडदैनन् । तिनीहरुको अन्त दुःखद र नराम्रो हुँदछ । परमेश्वर भलो, असल, प्रेमिलो हुनुहुन्छ । उहाँदयालु, कृपालु र क्षमाशील पनि हुनुहुन्छ । फेरी परमेश्वर न्यायी र न्याय गर्ने पनि हुनु हुन्छ । हरेक मानिसको तिनीहरुको गुणर दोषको आधारमा अनि तिनीहरुको काम अनुसारको न्याय गर्नु हुन्छ । किनकि परमेश्वर ओमेगा हुनु हुन्छ । कसैको जीवनको अनत संयोगान्त त कसैको वियोगान्त हुन्छ । कसैको परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश भने कसैको नरकमा प्रवेश भएर जीवनको अन्त हुन्छ ।
तपाईंको जीवनमा कति कुराहरु कसरी शुरु गर्नुहुन्छ र कसरी अन्त गर्नु हुन्छ भन्ने कुराले पनि महत्व राख्दछ । राम्रो तरिकाले शुरु हुनु अनि राम्रो तरिकाले अन्त हुनु यो अति राम्रो कुरा हो । कसैले राम्रो शुरुआत गर्छन् र नराम्रो तरिकाले अन्त गर्दछन् । आज तपाईंको जीवनमा कसरी हिंड्नु भएको छ । आज तपाईंको जीवनलाई जाँच गर्नु पर्ने समय आएको छ । यदि हामी परमेश्वरको वचन र उहाँको आज्ञा विपरित हिंडेका छौं भने निश्चय पनि अन्त डर लाग्दो हुनेछ । किनकि परमेश्वर ओमेगा हुनु हुन्छ । उहाँ अन्तको परमेश्वर हुनु हुन्छ । उहाँ दयालु कृपालु पनि हुनु हुन्छ अनि उहाँ न्याय गर्ने परमेश्वर पनि हुनु हुन्छ । हिब्रुका लेखकले यसरी भनेका छन्, “हाम्रा विश्वास शुरु गर्नु हुने र पूरा गर्नुहुने येशूलाई हेरौं….” हिब्रु १२:२क । उहाँले शुरु गर्नु हुन्छ र अन्त पनि गर्नु हुन्छ । यस पृथ्वी पनि शुरु भएको हो र यसको अन्त पनि छ । हाम्रो विश्वासको जीवनको शुरुआत छ र अन्त पनि छ ।
सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ,
यहाँ अल्फा र ओमेगा मात्रै नभनिएर सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर भन्नु हुन्छ भने भनिएको छ । निश्चय पनि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनु हुन्छ । उहाँ सबै शक्तिहरु भन्दा महान शक्ति भएको परमेश्वर हुनु हुन्छ । किनभने मानिस जातिलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नु हुन्छ । हामी मानिसलाई परमेश्वरले उहाँसँग बातचीत गर्न उहाँ संगति गर्न, उहाँको धार्मिकतामा जिउन उहाँको प्रजा बनाउनु भएको हो । यद्यपि हामी मानिस कतिचोटी परमेश्वरको इच्छा अनुसारको जीवन जिउन सक्दैनौं । हामी उहाँको धार्मिकतामा हिंडीरहेका हुँदैनौं । संसारिक र अनात्मिक कुराहरुको जंजालमा र जालोमा बढी नै पर्न पुगीरहेका हुन्छौं । तर सर्बशक्तिमान परमेश्वरले हामीलाई उहाँको छत्र छायाँमा आएको चाहनु हुन्छ । उहाँको सुरक्षाको छहारीमुनि आएको चाहनु हुन्छ । उहाँको वचन र आज्ञामा हिंडेको चाहनु हुन्छ । परमेश्वर जहिले पनि हाम्रो भलाई चाहनु हुन्छ । उहाँ जहिल्यै हाम्रो असल भएको चाहनु हुन्छ । तापनि हामीले परमेश्वरलाई विर्सन्छौं । परमेश्वरको काम र उहाँको प्रेमलाई भुली दिन्छौं । अनि जब समस्यामा पर्न पुग्छौं अनि अन्धकारको शक्तिको बन्धनमा परीरहेका हुन्छौं । हामीले यो कुरा जान्नु आवश्यक कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनु हुन्छ । हामीलाई उहाँले प्रम गर्नु हुन्छ । उहाँले हाम्रो पाप र अधर्मको क्षमा पनि गर्नु हुन्छ । र उहाँले जहिले हाम्रो निम्ति असल र सकारात्मक कुरा भन्नु हुन्छ । उहाले हाम्रो विषयमा कहिल्यै पनि नराम्रो कुरा भन्नु हुन्न । उहाँ एउटा असल पिता हुनु हुन्छ । जस्तो कि तपाईंको विषयमा राम्रो सोच्ने अनि राम्रो कुरा भन्नु हुन्छ । कतिचोटी हामी परमेश्वरको विरुद्धमा बोल्यौ होला । कति चोटी हामी परमेश्वरदेखि टाढा गयौं होला । हामी पाप र डरको बन्धनमा जियौं होला । तर परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनु हुन्छ । उहाँले हामीलाई सबै प्रकारको बन्धनबाट छुटकारा दिनु हुन्छ । उहाँले हाम्रो निम्ति असल र राम्रो कुरा भन्नु हुन्छ ।
जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो र जो आउनुहुनेछ ।
यहाँ परमेश्वर शुरु हुनु भएको होईन । अनि उहाँ अन्त पनि हुनु हुन्न । तर उहाँले नै सबै कुरा शुरु गर्नु भएको हो । उहाँले नै सबै कुराको अन्त पनि गर्नु हुन्छ । निश्चय परमेश्वरको अस्त्तिव हिजो पनि थियो आज पनि छ र भोली पनि हुनेछ । उहाँ कहिले पनि बदली हुनु हुन्न । परमेश्वर विगतको हुनु हुन्छ । परमेश्वर वर्तमानको पनि परमेश्वर हुनु हुन्छ । अनि उहाँ भविष्यको पनि परमेश्वर हुनु हुन्छ । परमेश्वरले इतिहासमा जे काम गर्नु भयो त्यो आज गर्नु हुन्छ अनि परमेश्वरले त्यो भविष्यमा पनि गर्नु हुनेछ । “येशू ख्रीष्ट हिजो, आज र सदा सर्वदा एकसमान हुनुहुन्छ ।” हिब्रु १३:८ । उहाँले २००० बर्ष अगाडि जे काम गर्नु भयो, त्यो काम आज पनि गर्नु हुन्छ । उहाँले त्यो भोली पनि गर्नु हुन्छ । परमेश्वर इतिहासमा सीमित रहने परमेश्वर हुनु हुन्न । परमेश्वर आज पनि हुनु हुन्छ । कति चोटी मानिस भविष्यको चिन्ता फिक्रीमा जिउँछन् । भोली के हुने हो भनेर हिंड्दछन् । निराशामा जिउँदछन् । तर बुझनु पर्ने कुरा के हो भने परमेश्वर जहिले पनि असल परमेश्वर हुनु हुन्छ । तपाईंले सबै भरोसा र विश्वास परमेश्वरमा राख्नु पर्दछ । ताकि परमेश्वरमा तपाईंको भविष्य असल उजजवल छ भनेर विश्वास गरेर उहाँमा धार्मिक जीवन जिउनु पर्दछ । हामी जे गर्छौ त्यसै अनुसारको फल प्राप्त गर्दछौं । निश्चय पनि हामीले आलु रोपेर स्याउको फलको आशा राख्न सक्दैनौं । सुन्तला रोपेर केराको फलको आशा राख्न सक्दैनौ । त्यसलै हामी परमेश्वरमा भरोसा राख्नु पर्दछ । उहाँको असल कुराको प्रतिक्षामा जिउनु पर्दछ । परमेश्वर तपाईंको कुभलो चिताउने परमेश्वर हुनु हुन्न । उहाँले तपाईंको असल भलाईको कुरा नै सोंच्ने परमेश्वर हुनु हुन्छ । किनकि उहाँ जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो र जो आउनुहुनेछ ।
परमेश्वर अल्फा र ओमेगा हुनु हुन्छ । परमेश्वर सर्बशक्तिमान हुनु हुन्छ । जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो र जो आउनुहुनेछ । कति कुरा तपाईंको जीवनमा असल तरिकाले शुरु हुन सकेका छैनन होला । यस कुराले तपाईंको जीवनमा निराशा छ होला । यस कुराले तपाईंको हतोत्साह ल्याई राखेको होला । एउटा कुरा हामीले के बुझन जरुरी छ भने यदि तपाईंले परमेश्वरमा भरोसा राख्नु हुन्छ भने यदि उहाँको वचनको पालन गर्नु हुन्छ भने परमेश्वरमा तपाईंको निम्ति असल कुराको शुरुआत हुनेछ । परमेश्वरले नै तपाईको जीवनमा असल कुरा शुरु गर्नु हुन्छ र उहाँले नै असल तरिकाले अन्त गर्नु हुन्छ । के तपाईंको जीवनमा कुनै असल कुरा शुरु भएको छैन ? जहिले खराबै मात्र भईरहेको छ? के तपाईंको कुरा राम्ररी अन्त हुन सकेको छैन? तपाईंलाई कसले राम्रो र असल कुरा भनेका छ्रैनन् । तपाई विषयमा केवल नकारात्मक कुरा मात्रै भनेका छन् कि? के परमेश्वर हुनु हुन्न उहाँले मेरो जीवनमा काम गर्नु हुन्न भन्ने सोंच्दै हुनु हुन्छ कि? उहाँको छत्रछायाँमा आउनु होस् । उहाँले नयाँ काम तपाईंको जीवनमा गर्नु हुन्छ । उहाँले तपाईंको जीवनमा असल करा शुरु गर्नु हुन्छ । खराब कुरालाई येशूलाई दिएर परमेश्वरमा फर्कनु जरुरी छ । उहाँ सर्वशक्तिमा परमेश्वर हुनु हुन्छ । उहाँ कहिल्यै वदलिनु हुन्न । उहाँले तपाईंको भलो चाहनु हुन्छ ।
-रेशम कुमार सुनुवार
« उच्च स्थानमा रहेको मण्डली
१५ वर्ष उमेर मुनिकाहरुको फूटबल प्रतियोगिता २०१४ »